Ko Zaw Phone (Coffee Circle) | Food Magazine Myanmar | Page 2
Ko Zaw Phone (Coffee Circle)
Honey Ginger Lemon Hot Brewed Coffee
ယခုလ မိုးရာသီဖြစ်ပြီး ဖျားနာကြတဲ့လူတွေ တော်တော်များများတွေ့ရတာကြောင့် နှာစေးချောင်းဆိုး အအေးမိရင် သောက်လို့ကောင်းမယ့် ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါတယ်။ အမည်ကတော့ Honey “Ginger Lemon Hot Brewed Coffee” ပါ။ ဒီနေရာမှာ Brewed Coffee လို့ပြောထားတဲ့အလျောက် ကော်ဖီကိုတော့ အက်စပရပ် ....
27 - July - 2017
Mochaccino With A Twist
ဒီလအတွက် ကော်ဖီအပူလေး ဖန်တီးသွားပါမယ်။ Mochaccino လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်း ဒီကော်ဖီလေးကတော့ အများသိပြီး ရေပန်းစားတဲ့ Cappuccino ကော်ဖီကို အခြေခံပြီး ချောကလက်အရသာ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရောစပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Mochaccino WithaTwist လို့ စာရေးသူအမည်ထားခြင်းကတော့ ကော်ဖီဖျော်ရာမှာ Latte ....
Lemongrass Honey Ginger Latte
Lemongrass Honey Ginger Latte အခု June လအတွက် ကော်ဖီအပူ Latte တစ်ခွက် ကိုဖန်တီးပါမယ်။ ဒီကော်ဖီလေးကို သောက်လိုက်ရင်ှစေ ကိုရောက်သွားတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ရရှိနိုင်စေမယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဒီခံစားမှုမျိုးပေးစွမ်းနိုင်အောင် အသုံးပြုထားတဲ့ ပါ ဝင်ပစ္စည်းများကတော့ စပါးလင်၊ ....
Basil Smashed Orange Pineapple Espresso Soda
Basil Smashed Orange Pineapple Espresso Soda ဒီမေလမှာတော့ အက်စပရပ်စိုကော်ဖီကို စူးစူးရှရှ ဆိုဒါနဲ့တွဲဖက်အခြေခံထားတဲ့ ကော်ဖီအေးဆန်းဆန်း လေးတစ်ခွက်ကို ဖန်တီးပါမယ်။ သဘာဝအသီးများဖြစ်သော ပျားလိမ္မော်နှင့် နာနတ်သီးတို့ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြု ပြီး အနံ့အနေနဲ့တော့ ကော်ဖီမှာထည့်နေကြမဟုတ်တဲ့ (Basil) ပင်စိမ်းရွက်တို့ကို အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သောက်လိုက်ရင် ....
Ocean Breeze ဒီလအတွက် အအေးလေးတစ်ခွက် ဖန်တီးသွားပါ မယ်။ Ocean Breeze လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီ အအေးလေးကို ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေအနားယူရင်း သောက်ရင် လိုက်ဖက်မယ့် သောက်စရာလေး တစ်ခွက် ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အပေါ်ယံအလွှာ အရောင်က စိမ်းပြာလေးဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို ....
Lychee Shakerato ဒီလအတွက်တော့ ရာသီဥတုလည်း ပူလာတာနဲ့ အမျှသောက်လို့ကောင်းမယ့် ကော်ဖီအအေး လည်းဖြစ်ပြီး အပူပေါ့ပါးပြီး လန်းဆန်းစေမယ့် Shakerato ကော်ဖီအမျိုးအစား ဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Shakerato ဆိုတာကတော့ ကော်ဖီ (အက်စပရပ်စို) ကို ရေခဲတုံးများနဲ့ Shaker (ကော့တေးအဖျော်သုံး စတီးခွက်) ထဲထည့်ပြီး ကော့တေးစပ်သလို လှုပ်ခါပြီးဖျော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ....
အခု November လမှာ ဖန်တီးမယ့် Drink လေးရဲ့ အမည်ကတော့ Pineapple Granita ဖြစ်ပါတယ်။ Granita ကတော့ အီတလီနိုင်ငံမှာ အစပြုခဲ့တဲ့ အချိုပွဲလို သောက်စရာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရေခဲလေးတွေကို အမှုန့်မှုန့် ကြေညက်အောင် ရေခဲမွှေစက်နဲ့ ရောမွှေပြီးပြုလုပ်မယ့် Drink လေးတစ်ခုပါ။ ....
Almond Brownie Coffee Dessert
အခု စက်တင်ဘာလမှာ ဖန်တီးမယ့် သောက်စရာကတော့ ရေခဲနဲ့ ကြိတ်မွှေထားတဲ့ Ice-blended ဖြစ်ပြီး အချိုတည်းလို့ကောင်းမယ့် Dessert အချိုပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေခဲဖတ်ညက်ညောအောင် ဖန်တီးမှာမို့ အရည်ပျစ်ပျစ်လေးနဲ့ ချိုအေးအေးလေးဖြစ်မယ့်အပြင် Brownie ချောကလတ်ကိတ်ကို အပေါ်ဆုံးကတင်ပြီး အလှဆင်ထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိုပွဲ dessert ကို ....